Arduino makiti uye mabhodhi ekutanga munyika ino | Mahara emahara
Kutanga naArduino: ndeapi mabhodhi uye makiti anogona kuve anonakidza kutanga
MuHWLibre pane akawanda mapurojekiti anoitwa zvichibva pane imwe yesarudzo dzakasiyana dzeArduino dziripo mumusika nezvatataura nezvazvo. Ichokwadi ndechekuti mikana yakawanda uye, sezvazvinowanzoitika, yega yega ine yayo peculiities uye inowanzo kuve inonakidza kupfuura vamwe vese kuita imwe chirongwa yehunhu hwayo.
Nekuda kweizvi nhasi tinoda kumira kwechinguva uye, pachinzvimbo chekuenderera tichitaura nezve akasiyana mapurojekiti, tora mhepo shoma tisangane kuti tikurukure nhaurwa yakapusa uye kuti zvirokwazvo, patakatanga munyika ino, zvingadai zvakatishandira zvakanaka.batsira sezvazviri chaizvo pekutangira, chimwe chinhu chichave chinonyanya kubatsira kune avo vese vanhu vari kutanga mune ino inonakidza uye inotamba nyika.
Kana iwe wasvika panguva ino, zvirokwazvo iwe uchave une shungu nezve zvese izvo kuva nerumwe ruzivo rwunogona kupa izvo zvinokutendera iwe, semuenzaniso, kugadzira yako wega marobhoti, gadzirisa akasiyana ezuva nezuva zviito iwe zvaunoita mumba mako wega ... uye zvese iyi yekutenda kushandiswa kweasina kudhura yemahara Hardware chikuva. Totanga here?
1 Kune mhando dzakasiyana dzeArduino bhodhi, ndeipi yandinosarudza?
1.1 Yepamutemo Arduino mabhodhi
1.2 Arduino inoenderana mabhodhi
2 Yakakurudzirwa Starter Kits
Kune mhando dzakasiyana dzeArduino bhodhi, ndeipi yandinosarudza?
Kana iwe uchinge wajekeswa nezve izvo zvaunoda kuita, pamwe danho rekutanga ndere kunyatso kusarudza iro Arduino bhodhi raunofanira kusarudza. Tenda kana kwete, chokwadi ndechekuti sarudzo iyi ichave hwaro hwekupedzisira mhedzisiro yaunowana kubva ipapo kuvakwa kwayo kunogona kudzikisira mazano ako zvishoma uye pamusoro pemhinduro dzese dzaunogona kutora kuti basa riite.
Pfungwa yakakosha haisi chete saizi uye zvigadzirwa zvaunogona kubatanidza kwazviri, asi bhodhi pachayo sezvo isu tisingakwanise kungozvigumira pakuwana Arduino saizvozvo, ndinoreva bhodhi repamutemo, asi zvakare aya emhando mhando. kune akati wandei masisitimu) isu tinofanirwa kuwedzera zvese izvo zvese izvo zvinowirirana mabhodhi zvinotipa isu, chimwe chinhu chinowedzera zvakanyanya sarudzo dzedu kubvira, kana pakutanga Tinoda saizi chaiyo uye chinongedzo cherimwe rudzi, pamwe bhodhi repamutemo hariripe asi rinoenderana.
Yepamutemo Arduino mabhodhi
Arduino, pamusoro pemakore (yanga iri pamusika kubva 2006) yakabva mukupihwa mune imwechete fomati kuva inowanikwa nhasi mune isingasviki gumi nemaviri shanduro kune iyo, kana nguva yacho yasvika, tinogona kuwedzera izvo zvatoregedzwa. Panguva ino, kana iwe usingakwanise kuwana iyo bhodhi inonyatsokodzera zvaunoda, pamwe unogona kuwana imwe yekuwedzera-mawedzero, uye makiti ayo Arduino anotengesa zviri pamutemo kuburikidza neayo webhusaiti kana kubva kune chero ayo epamutemo vaparadzi.
Panguva ino, sezvaungaona mumufananidzo wapfuura, zvakanyanya mutsauko uripo pakati pesarudzo idzo Arduino inotipa inoenderana zvakanyanya ne saizi, kubatanidza uye huwandu hwezvinhu zviviri zveanalogog uye zvemadhijitari uye zvinobuda iyo ine ndiro yakasarudzwa ine. Iyo poindi yatinofanirwa kufunga nezvayo ndangariro yemukati inopihwa nebhodhi pachayo, kuitira kuti iyo yakaoma (padanho rekodhi) chirongwa icho chatiri kuzokwidza, chinoda chiyeuchidzo chikuru.
Pakati pesarudzo dzakasiyana dzatinadzo, tiri mudanho rekutanga iyo Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.. Mune mawonero angu, ndizvo zvakanaka kana uri kutanga.
Nhanho imwe kumusoro tinowana iyo Arduino zero, yakanaka kana iwe uchida simba rakawanda sezvo vaine CPU ine simba uye yakakura ndangariro zvese RAM neROM. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinayo Arduino Mega.
Panguva ino, tsananguro inofanirwa kutariswa, kune rumwe rutivi, chokwadi icho zvinosuruvarisa kune akawanda emanyepo eArduino mabhodhi pamusika, iyo, dzimwe nguva inogona kuve yakaoma kwazvo kuona kana ichokwadi kana kunyepa, kunyanya kana tichitsvaga a Arduino Uno. Chechipiri, ndikuudze kuti mahwendefa Arduino inoitirwa musika weUnited States chete, nepo kunze kweichi chigadzirwa chinotengeswa seChokwadi iwo chete musiyano uripo pakati pezvikwata zviviri zviri pamutemo uye zvekushambadzira nyaya.
Arduino inoenderana mabhodhi
Panguva iyoyo, kunyanya kana iwe uine ruzivo rwakakwana rwemagetsi, unogona kufunga nezve zano rekuvaka rako bhodhi rinoenderana neese Arduino kits uye zvishongedzo. Iyi ndiyo chaiyo pfungwa yekuti vazhinji vagadziri vatevera avo vakatora mukana wekukweva uye mukurumbira wepuratifomu iyi kupa mhinduro, mamwe anonakidza kwazvo, inoenderana zvizere ne mutengo wakaderera.
Pakati pemahwendefa anoenderana atinogona kuwana, zvinodikanwa kusiyanisa izvo, mumaonero angu, akanakisa ndiwo anokutendera shandisa nharaunda yekusimudzira Arduino IDE Ipo, padanho rehardware, ivo vanokutendera iwe kuti ushandise iyo imwecheteyo Hardware, kunyanya maererano nezvinhu, sezvo, muzvikamu, iwe unowanawo vazhinji vakasiyana vagadziri vane akasiyana akasiyana mazano. Pakati pemaenzaniso akasiyana ayo atinogona kuwana anosimbisa inozivikanwa, kunyanya nharaunda iriko uye kuti, kana nguva yasvika, inogona kubatsira zvikuru mumibvunzo ine chekuita nerutsigiro rwehunyanzvi
Freedino: Zvichida inonyanya kuzivikanwa, iyi mhuri yeArduino-inoenderana ine akati wandei mamabhodhi akafanana neshanduro dzekutanga. Iyo yakakurudzirwa modhi ndeye Epic, inoenderana neArduino Mega uye inodhura $ 44.
Zigduino: Imwe yemamodeli anowirirana anowedzera mamwe mashandiro emutengo wakaenzana newawo wekutanga. Mune ino kesi, kune yakavakirwa-muZigbee yekubatanidza ye $ 70.
Funduino: Imwe yemamodeli inoenderana ne Arduino Uno inodhura zvakanyanya iwe yaunogona kuwana. Iyo inodhura isingasviki manomwe euros uye kune mamodheru anoenderana nemamwe mavhezheni.
Freaduin: Sezvauri kuona, chikamu chekunyengera kwemabhodhi anoenderana ndiko kuomesa zita pamwe kutora mukana wekuvhiringidzika. Iyi modhi yakaenzana neiyo Uno bhodhi asi inodhura maeuro gumi nemasere chete.
SaintSmart Inoenderana neArduino Mega 2560, inodhura isingasvike makumi maviri euros.
XcSource: Imwe yemhando dzayo dzinonakidza ndidzo dzinoenderana ne Arduino Uno, uye inobuda kwema12 euros.
BQ Zum Core: Kunyangwe bhodhi iri richinakidza kwazvo, chokwadi ndechekuti iwe unofanirwa kungwarira kuti hazvinyatsoenderana neArduino. Pfungwa ndeyekuti mushure meiyi sarudzo nharaunda yese yakagadzirwa uko iwe kwaunogona kuwana mamamojuru, dzidziso, rutsigiro uye kunyangwe nzvimbo yekuronga inoenderana nemabhodhi eArduino.
Yakakurudzirwa Starter Kits
Kana tangosarudza kuti ndeipi bhodhi iri inonyanya kufadza purojekiti yedu, ingave iri yepamutemo kana inoenderana, inguva yekutenga kit. Chaizvoizvo pakusarudza bhodhi izvo zvatiinazvo ndeizvi, bhodhi, asi isu tinoda zvimwe zvinhu senge tambo yeUSB kubva kwazviri kuisa software yedu mundangariro yayo kana kufudza simba rayo kune mamwe akaomarara mamodule ayo anopa zvakadzama zvinoreva chirongwa chose.
Kuti tirege kuzvinetsa zvakanyanya, nekuti izvo zvinodiwa neprojekti zvichaita kuti tizive chaizvo zvatinogona kana zvatisingade, ndichaenderera mberi nekutaura pane mamwe matangi ekutanga aunogona kuwana mune chero chitoro chepamutemo kana muparidzi brand, zvese kubva kuArduino pachayo, pamwe nechero ipi yemabhodhi ayo anoenderana. Mupfungwa iyi, zvinoenderana nezvinhu zvinowanikwa mukiti, ichave inodhura kana kudhura, sarudzo dzakanyanya uye dzakasiyana:
Arduino Yepamutemo Kit: Kitaki chekutanga, muchiSpanish uye nemanyorero uye akasiyana mapurojekiti akagadzirira kuungana.
Kit Arduino Sparkfun Shanduro 3.2: Kodhi yepamutemo yevanotanga uye yepakati nhanho nezvose zvaunoda zvekutanga mapurojekiti uye kudyidzana neiyo Hardware. Inosanganisira bhuku rakazara muChirungu asi iyo Spanish vhezheni inogona kutorwa pamhepo.
Arduino Starter Kit: Iyo yakakwana yekutanga kit ine mhando inovimbisa. Iyo kit iyo inotengesa www.muzvideo.org (iyo kambani inodzora yeArduino brand kunze kweUnited States). Iyi kit inosanganisira bhuku reSpanish, ndiro Arduino UNO uye pane mamwe mawebhusaiti eSpanish anotengeswa seyepakutanga.
Kit inoenderana ne Arduino Uno R3: ine makumi mana ezviitiko mune inoshanda kesi. Iyo ndeimwe yesarudzo dzakachipa kwazvo.
Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.: Kana iwe uchida kuenda kune iyo Funduino inoenderana bhodhi, kit iyi isarudzo iri nani pane yakaparadzana bhodhi.
Kuman Super Starter Kit: Yakanaka kune vanotanga. Imwe yeanonyanya kuzivikanwa unofficial anoenderana Arduino kits. Inosanganisira zvikamu makumi mana nezvina, zvidzidzo uye kodhi yekodhi yemapurojekiti.
Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.: Kit inogadziridzwa muna2016 uye iine chinhu chakapfuura cheiyo yapfuura (makumi mana neshanu). Inosanganisira anopfuura makumi maviri mapurojekiti mune ino yakazara seti nezvose zvaunoda kuti ubatanidzwe zvizere neArduino.
SainSmart Yekutanga Starter Kit: Kit Arduino UNO Mutengo wakagadziriswa uye nezvose zvaunoda kuti utange kuyedza uye kuita kusvika kumabasa gumi nemanomwe nekutevera avo vadzidzisi. Izvo hazvisanganise bhuku remanyorerwo nedanho-nhanho tutorials asi zvese zviripo zvekutora uye zvakare vane chiteshi pane YouTube.
Zoom Kit: Nehurukuro yakangwarira uye dzakasiyana uye zvemhando yezvinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Kutanga naArduino: ndeapi mabhodhi uye makiti anogona kuve anonakidza kutanga
Misiyano yepakutanga mahwendefa uye makopi, kana isu tichitaura nezve ndiro uye yakavhurwa sosi software inokwenya zvishoma…. kunyanya apo nhengo dzinoverengeka dzeboka rekutanga rakagadzira arduino pachena vakaenda kuhofisi yepamutemo kunyoresa zita reArdiuino.
Pindura kuna Unai
Iyo yakasanganiswa iri pakati peArduino yeiyi uye Shumba 2 yakashanda zvakanyatsondibatsira. 3D anodhindisa anoshamisa pane ino midziyo uye ndokuzoenderana neArduino zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa
Idzi ndidzo dzese nhau dzinopihwa neiyo Raspberry Pi 3 Model B +